MUUNGAAB “XAMAR WAXAA LA RABAA INAY YEELATO ALBAAB LAGA SOO GALO IYO MID KALE OO LAGA BAXO” |
MUUNGAAB “XAMAR WAXAA LA RABAA INAY YEELATO ALBAAB LAGA SOO GALO IYO MID KALE OO LAGA BAXO”
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), ayaa ku waramaaya inay samayn doonaan albaab laga soo galo Magaalada Muqdiso iyo mid kaloo laga baxo.
“Xamar waxaa la rabaa inay yeelato albaab laga soo galo iyo mid kale oo laga baxo, tan waxay qayb ka tahay qorshaheyna sanadka 2015-ka.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir.
Waxa kaloo uu yiri “Qorshaha Maamulka waxaa ka mid ah in 10-kii ama 20-kii guri uu yeesho qof masuul ah, oo la shaqeeya nin askari ah ama laba askari, si loo ogaado guri kasta dhaq dhaqaaqiisa, haddii wax ku soo kordhaan iyo haddii kalaba.”
Muungaab, ayaa yiri “Arrintaan waxay qayb ka noqon doontaa barnaamijka derisaynta oo lagu dersaayo qoysaska ku nool Magaalada Muqdisho, waxay kaloo qayb ka noqon doontaa in la suggo ammaanka.”
“Dadka reer Muqdisho inay la shaqeeyaan ayaa laga rabaa Maamulada Degmooyinka iyo ka Gobolka. Soo sheega qof kasta oo aad ka shakisaan, Saldhiga kuu dhow ku soo wargeli.” Ayuu sii raaciyay Duqa Magaalada Muqdisho.
Muungaab, ayaa hadalkaan ka sheegay munaasabad lagu qabtay Degmada Hodan, oo Maamulka Degmadaasi uu ku soo bandhigaayay waxqabadka sanadkii laga soo tagey.
Maamulka Gobolka Banaadir, ayaa sanadkaan looga fadhiyaa inay Magaalada Muqdisho ka hirgeliyaan doorasho afti dadweyne ah, si Maamulkaan midka xigga uu u noqdo, mid ay soo doorteen dadka degan Caasimada.